> Resource > Ladnaansho > Laptop Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Laptop Hard Drive
Sidee baan ka Laptop soo ceshano karaa Data?
Hi oo dhan, qaar ka mid ah waraaqaha xafiiska ganacsiga aan la tirtiray ka laptop HP. Ma jiraa wax aan iyaga dib ugu heli karaa? My saaxiib ii sheegay in files aan weli waa ku wadid aan laptop ee adag. Fadlan ii caawin!!
Saaxiibkaa waa xaq, warqadaha tirtiray ayaa weli ku wadid aad HP laptop ee adag. Laakiin ay si fudud overwritten karaa iyadoo xogta cusub ku laptop. Sidaas, xalka ugu fiican in aad ka bogsato xogta ka laptop waa in aad joojiso qaadashada laptop oo heli barnaamijka xogta laptop ah si ay kuu caawiyaan.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa mid ka mid ah barnaamijyada soo kabashada xogta laptop ugu waxtar leh oo khatar la'aan taas oo ka caawisa in aad ka bogsato xogta ka laptop fudayd, iyadoo aan loo eegayn xogta lumay ay sabab u tahay shil ama ula kac ah u tirtira, formatting drive adag, qalad nidaamka , ama xitaa jeermiska fayraska. Waxa aad bixisaa awood u leh inay dib u soo ceshano daraasiin noocyada file oo ay ku jiraan waraaqaha xafiiska, sawirada, files audio, videos iyo emails ka Laptop. Waxaa si fiican u la shaqeysaa magac laptop ku dhowaad dhammaan caanka ah, sida Lenovo, Toshiba, Sony, HP, Dell, iwm
Waxaad kala soo bixi kartaa version raad ah Wondershare Data Recovery hoos ku qoran. Fadlan dooro nooca saxda ah ee OS computer aad.
Soo Celinta Xogta laga Laptop in 3 Talaabooyinka
Aan u qabtaan soo kabashada la Windows version of barnaamijka. Ka hor inta aan helno waxa ay bilowday, fadlan dajiyo barnaamij ku saabsan drive kale adag ee aad laptop.
Kadib markii ay barnaamijka iyo beddelaan galay "Standard Mode", waxaa lagu siin doonaa 3 hababka soo kabashada uu furmo suuqa hoose. Waxaad si taxadar leh eegi kartaa tilmaamaha Mudan in ay bartaan sida ay u shaqeeyaan. Halkan, waxaad isku dayi kartaa la "lumay Recovery File" mode marka hore.
Tallaabada 2 Sawirka wadid aad laptop ee adag
Markaas barnaamijka drives on your adag laptop ku tusi doonaa si toos ah. Waxaad u baahan tahay oo keliya in aad doorato mid ka mid ah in xogta aad ka lumay oo guji "bilow" badhanka si ay u bilaabaan u baar.
Fiiro gaar ah: Haddii faylasha aad laptop ayaa laga badiyay sababta oo ah formatting, fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 Celinta xogta ka laptop
Helay xog aad laptop ayaa la soo bandhigi doonaa in qaybaha ama waddooyinkiisa sawirka kadib. Waxaa laguu oggol yahay in aad u aragto magacyada file si loo hubiyo sida badan files waxaad awoodi doontaa inaad dib u soo ceshano.
Ugu dambeyntii, waxaad dooran kartaa faylasha aad rabto in la soo celiyo oo guji "Ladnaansho" button in ay doortaan gal ah ku saabsan laptop si ay u sii.
Fadlan ha badbaadiyo xogta soo kabsaday dib ay goobta asalka ah. Waxa fiican in ay u celinaynaa on a drive adag oo cusub ku laptop.
Fiiro gaar ah: Haddii aad doonaysid in aad ka soo kabsado xogta ka laptop ah oo la jebiyo ama burburtay laptop, waxaad u baahan tahay inaad ka soo qaato wadid aad laptop ee adag oo ku xirmaan computer kale si ay u sameeyaan dib u soo kabashada.